We She Me: အမဲသား ကြော်နည်းများ
phyophyo - 8/31/08, 6:49 PM
look so nice and think very delicous. let me try :)
မဇနိ - 8/31/08, 6:58 PM
အသားဟင်းတွေမကြိုက်ပေမယ့် အမဲသားကြော်တော့ သိပ်ကြိုက်ဗျာ
အမဲသား ပဲငပိကြော်တော့ မစားဖူးသေးဘူး
ဒီဟင်းတွေကြည့်ပြီး ညစာစားလိုက်အုံးမယ် ဂလု ဂလု
Nu Thwe - 9/1/08, 3:19 AM
ကောင်းလှချည်လား။ ဗိုက်အရမ်းဆာကုန်ပြီနော်...ပြေးချက်လိုက်ဦးမယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာတော့ ဟင်းချက်လည်း ကိုယ်၊ ပန်းကန်ဆေးလည်း ကိုယ်၊ သန့်ရှင်းရေးလည်း ကိုယ်.....အမလေး ကိုယ့်ကိုကိုယ် တော်တော် သနားသွားပြီ။ ဒီည ပိုစားမယ်း)
Moe Cho Thinn - 9/1/08, 7:35 AM
အမဲသားက ချက်ချက်၊ ကြော်ကြော် ပညာအရမ်းပါတယ်။ မချက်တတ်၊ မကြော်တတ်ရင် လုံးလုံး စားလို့ မကောင်းလို့ အမြဲလက်ရှောင်ပါတယ်။ ဒါက ဆရာသမားတွေ ကိစ္စလေ။
ခုတော့ ကိုAndy နည်းပေးလို့ စမ်းလိုက်အုံးမယ်လေ။ ပျော်ပျော်ပါးပါးပေါ့။
လုလု - 9/1/08, 9:02 PM
ကိုအန်ဒီရေ့့့ 
အမဲခြောက်ကို မီးကင်ပြီး ဆီလေးဆမ်းပြီး စား၊ ရေနွေးကြမ်းလေးသောက်ဆိုရင် သိပ်ကြိုက်တာပဲ
ပြောရင်း စားချင်လာပြီ့့့  :)
Andy Myint - 9/1/08, 10:02 PM
Try 'em Phyo Phyo... I'm sure you will like :)
မဇနိရေ... မြန်မာပြည်မှာ နေတုန်းက အမဲသား မစားဘူး။ အမဲသားကြော်တော့ စားတယ် ဟီးဟီး။
ပြောမနေနဲ့တော့ မနုသွဲ့ရေ... ထမင်းချက်၊ ပန်းကန်ဆေး အကုန် လုပ်ရတယ်။ အပြင်က ၀ယ်စားရင်တောင် အ၀တ်လျှော် မီးပူတိုက် လုပ်ရဦးမယ်။ တစ်ခါတစ်လေ မြန်မာ အစားလေးတွေ ဥပမာ မုန်လာချဉ်တို့ ဘာတို့လည်း ကိုယ့်ဘာကိုယ် လုပ်ရသေးတယ်။ (ဟီးဟီး ကိုယ်ဘာကိုယ်ဆိုတာ ကျွန်တော့် အမျိုးသမီး လုပ်ရတာကို ပြောတာပါ။)
ဒီက အမဲသားတွေက မညှီလို ဘယ်လို ချက်ချက် စားကောင်းနေတာပဲ မမိုးချိုသင်းရေ။
ကျွန်တော်လည်း ကြိုက်တယ် မလုလု။ အမဲခြောက်ကလည်း တောက ၀ယ်တာပဲ စားကောင်းတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း ရယ်ဒီ မိတ်တွေက သစ်ပွသားကို ဆေးဆိုးပြီး အချိုမှုန့် စိမ်ထားသလိုပဲ။
Nu Thwe - 9/2/08, 4:42 AM
မုန်လာချဉ်၊ မုန်ညှင်းချဉ် လုပ်နည်းလေးရော မမျှချင်ဘူးလားလို့ မဟေသီကို မေးပေးပါ။ ကျေးဇူး။
Andy Myint - 9/3/08, 9:18 PM
တန်ခူး - 9/9/08, 6:57 PM
ကိုအန်ဒီရေ… အမဲကြော်ကြိုက်သူမို့မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါ… အမဲသားပဲငါးပိကို အရမ်းစိတ်ဝင်စားသွားပြီ…
Andy Myint - 9/9/08, 10:31 PM
ပဲငန်ပိနဲ့ ကြော်စား ကြည့်ပါ မတန်ခူး။ ကြိုက်သွားမှာပါ။
PAUK - 9/19/08, 1:47 AM
Andy Myint - 9/22/08, 10:16 PM
လုပ်စားကြည့်ပါ PAUK... :) ပြီးရင်လည်း ကျွေးဦးနော်...